Laga bilaabo Jimcaha Denmark oo Xayiraadaha qaadeysa dibna u fureysa Wadanka Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka DenmarkLaga bilaabo Jimcaha Denmark oo Xayiraadaha qaadeysa dibna u fureysa Wadanka
May 18, 2021 Wararka Denmark, Wararka Maanta Somaliska 0
Laga bilaabo Jimcaha, ku dhowaad wax kasta oo xayiraadaha ay saameeyeen ayaa dib loo furi doonaa.
“Laga bilaabo 21-ka Maajo, goobaha lagu caweeyo iyo discos-ka ayaa xirnaanaya oo kaliya. Waxyaabaha kale ayaa loo furi doonaa qaab kala duwan, ayuu yidhi hogaamiyaha xisbiga Konserfatifka Søren Pape Poulsen, ka dib markay xisbiyada deenishka ee baarlamanka ku heshiiyeen wajiga danbe ee furitaanka.
Ardayda dhigata dugsiga sare iyo dugsiga sare waxay ku noqon karaan fasalka. Intaas waxaa sii dheer, shaqaaluhu waxay si tartiib tartiib ah ugu laaban doonaan xafiiska – oo ah saddex waji. Marka hore, 20% ayaa la oggol yahay. Kadib, 50% bartamaha Juun iyo ugu dambeyn in shaqaalaha oo dhan ay tagi karaan goobta shaqada laga bilaabo Ogosto 1.
Laga bilaabo Jimcaha, dadku sidoo kale waxay awoodi doonaan inay booqdaan jardiinooyinka biyaha, garoomada lagu ciyaaro, casinos, iyo xadiiqooyinka gudaha.
Si loo oggolaado, waa inay muujiyaan baasaboor loo yaqaan ‘corona passport’ oo xaqiijinaya inay si buuxda loo tallaalay, ama ay ka bogsadeen coronavirus, ama dhowaan laga baaray fayraska.